Maraakiibta Mareykanka - Nalalka Nalalka ee MediaLight
FedEx 2-Day Raritaan: $ 4.95
FedEx Rarista Maalinta Dambe: $ 28.00
Fursadaha UPS sidoo kale waa la heli karaa iyada oo kharash ah, laakiin qiimaheena UPS ayaa ka sarreeya FedEx 2-Day.
????Haddii cinwaankaagu yahay PO ama APO / FPO address, waxaan u adeegsan doonnaa boostada heerka koowaad iyadoon loo eegin habka dhoofinta ee lagu muujiyey goobta wax iibsiga. Xirmooyinka fasallada koowaad waxay u badan tahay inay rartaan maalinta ganacsiga ee xigta maadaama aynaan mar dambe qaadin USPS soo qaadis maalinle ah (waxaan u isticmaalnaa FedEx ku dhowaad gaar ahaan).
Dhammaan xilliyada bixinta waa qiyaasidda xamuulka. Haddii rarkaaga habeen ama 2-maalin uusan ku imaanin waqtiga lagu qiyaasay, ma celin doonno rarka illaa aan u-qalano lacag-celinta shirkadda xamuulka. Hadda, ma xambaaraa waxay ixtiraamayaan dammaanadaha gudbinta sidaa darteed, si wax ku ool ah, ma jiraan wax celin ah oo loogu talagalay maraakiibta. Waxaan rajeyneynaa in isbedelkan uu dhawaan dhici doono.